Anbotek Automotive New Materials & Components Lab dia laboratoara antoko fahatelo manokana amin'ny fitiliana vokatra mifandraika amin'ny fiara.Manana fitaovana andrana feno izahay, ekipa fampandrosoana ara-teknika za-draharaha sy fitsapana, ary manolo-tena hanampy ny orinasa rehetra ao amin'ny indostrian'ny fiara hanatsara ny fahombiazany sy hampihenana ny risika, manomboka amin'ny fampandrosoana ny vokatra, ny famokarana, ny fandefasana hatramin'ny serivisy aorian'ny varotra, amin'ny lafiny rehetra amin'ny indostrian'ny fiara. rojo.Manome fanaraha-maso kalitao sady manome vahaolana amin'ireo olana fantatra sy miafina isan-karazany.
laboratoara fitaovana, laboratoara maivana, laboratoara mekanika, laboratoara fandoroana, laboratoara fiaretana, efitrano fitsapana fofona, laboratoara VOC, laboratoara atomization.
• Fitaovan'ny fiara: plastika, fingotra, loko, kasety, foam, lamba, hoditra, fitaovana metaly, coatings.
• Kojakoja anatiny amin'ny fiara: tontonana fitaovana, console afovoany, trim-baravarana, karipetra, valin-drihana, rivotra, vata fitehirizana, tahon-baravarana, andry, familiana, taratra masoandro, seza.
• Kojakoja ivelan'ny fiara: bumper aloha sy aoriana, grille d'air, sills sisiny, mitsingevana, fitaratra aoriana, tombo-kase, vombony, spoiler, wiper, fender, trano jiro, alim-jiro.
• Elektronika amin'ny fiara: jiro, môtô, rivo-manidina, wiper, switch, metatra, firaketana an-tsoratra, mody elektronika isan-karazany, sensor, fanapotehana hafanana, harnesses.
• Fitsapana ny fahombiazan'ny fitaovana (plastika Rockwell hamafin'ny morontsiraka, kasety friction, linear akanjo, kodiarana ny aina, kasety tack voalohany, kasety fihazonana tack, loko sarimihetsika fiantraikany, gloss fitsapana, sarimihetsika flexibilité, 100 grid fitsapana, compression set, pensilihazo ny hamafin'ny, coating hatevin'ny, ambonin'ny resistivity, volume resistivity, insulation fanoherana, mahazaka malefaka), Light fitsapana (xenon jiro, UV).
• Toetra mekanika: adin-tsaina, modulus tensile, tensile tensile, modulus flexural, tanjaky ny flexural, tanjaky ny taratra tohanana tsotra, tanjaky ny fiantraika cantilever, tanjaky ny peel, tanjaky ny rovitra, tanjaky ny peel tape.
• Fitsapana ny fahombiazan'ny hafanana (fanondroana miempo, hafanan'ny hafanana enta-mavesatra, hafanana manalefaka Vicat).
• Fitsapana ny fahombiazan'ny fandoroana (fandoroana anaty fiara, fandoroana mitsivalana mitsivalana, fanaraha-maso ny fivoahan'ny herinaratra, fitsapana ny tsindry amin'ny baolina).
• Fitsapana ny harerahana sy ny ain'ny kojakoja fiara (fitsapana harerahana mitambatra amin'ny torsion, fitsapana fiaretan'ny fiara anatiny, fitsapana fiaretan'ny fiara mitambatra anatiny, fitsapana fiaretan'ny frein fiara, fitsapana fiainana bokotra, fitsapana fiaretana boaty fitahirizana).
• Fitsapana fofona (habetsahan'ny fofona, fampiononana ny fofona, fananana fofona).
• Fitsapana VOC (aldehyde sy ketône: formaldehyde, acetaldehyde, acroleine, sns.; andiana benzene: benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, styrene, sns.).
• Fitsapana atomization (fomba gravimétrique, fomba gloss, fomba zavona).